Vaovao - Safidio ny masinina sarontava tokony ho fantatrao ireto teboka manaraka ireto
Amin'izao fotoana izao, mihamaro ny olona mahita ny tsenan'ny sarontava miaro, ary koa mahita ny fironana amin'ny fampandrosoana ho avy. Tena lehibe ny tsena. Mihamaro ny olona misafidy ny hividy fitaovana mekanika ho lasa mpanamboatra sarontava. Manana ireto fotoana manaraka ireto ve ianao handinihana ny safidinao?
1. Ankehitriny, ny mpandraharaha sy ny sakaizan'ny sahan'asa dia misafidy ny ho lasa mpanamboatra sarontava ho fampiharana ny lalàna. Nahoana isika no milaza an'izany? Ny fahalotoan'ny tontolo iainana no tena mahatonga izany. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny olona dia manao sarontava rehefa mivoaka. Ny olona malaza sasany dia mitatitra fa ny orinasa maska ​​dia ho lasa be mpitia. Avy amin'ireo lafin-javatra etsy ambony ireo dia mametraka fototra lehibe ho an'ny indostrian'ny sarontava amin'ny ho avy Mba hanitarana ny famokarana sarontava sy hamaly ny filan'ny tsena dia nanamboatra milina maska ​​sy fitaovana isan-karazany hanatevin-daharana ny famokarana ireo mpanamboatra maska.
2. Ny fampiasana ireo milina famokarana sy fitaovana famokarana dia tsy vitan'ny fitsitsiana ny asa fotsiny, fitsitsiana ny fotoana famokarana sy ny fampiharana ara-materialy, fa hiantohana ny famokarana mahomby, hiantohana ny kalitaon'ny vokatra sns. Izy io dia mitondra seho iray hafa amin'ny famokarana tanana ho an'ny famokarana orinasany manokana, noho izany dia fandrosoana lehibe ho an'ireo mpanamboatra sarontava. Na dia ny famokarana sarontava aza dia afaka mahita ny fitomboana haingana sy ny fampiroboroboana ireo orinasa miaraka amin'ireo fitaovana ireo, saingy miaraka amin'ireo orinasa mihamaro hatrany manatevin-daharana ny indostrian'ny fitaovana mekanika, raha te handresy ireo mpanamboatra maska ​​dia tsy maintsy manatsara ny fifaninan'ny orinasa izy ireo amin'ny fisafidianana ny tsara indrindra.
3. Izay orinasa afaka mitantana ny renivohitra dia voafetra ihany, ary na dia mety ho famokarana tena tsara aza ny fampiharana ny fitaovana fanaovana sarontava, saingy voafetra ny fampiasana fitaovana sy ny famokarana masinina. Rehefa mihalehibe sy mihabe ny orinasa dia fitaovana vitsivitsy ihany no tsy ampy. Ny fanitarana ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana masinina misaron-tava dia afaka mamorona tombony bebe kokoa, ary ny fividianana fitaovana bebe kokoa miaraka amin'ny vola voafetra dia tsy mitondra na inona na inona Vola voafetra, izay tena mahasoa tokoa amin'ny fampandrosoana ny orinasa.
Ankehitriny, ny filàna mafana amin'ny indostrian'ny sarontava dia ny famerana ny volan'ny mpandraharaha. Mba hamerenany haingana ny vidiny sy hitondrany tombony bebe kokoa ho azy ireo dia hisafidy ny hividy famokarana fitaovana izy ireo. Ny fametrahana tanana dia afaka mamonjy vola be, ary ny fahombiazany koa dia avo dia avo. Ny fampandrosoana haingana dia tena mety amin'ny fanombohana aloha, ary ireo mpanamboatra sarontava lehibe dia hividianana masinina bebe kokoa Ampitomboy ny tsenan'ny tsena, hitondra tombony avo kokoa ary fampandrosoana tsara kokoa ho an'ny orinasa.
milina fanaovana maska ​​tsy tenona, masinina fanaovana maska ​​tarehy, milina clamping hosotra, milina fanaovana sarontava tarehy tsy tenona, masinina mpanamboatra sarontava tarehy, milina fanaovana sarontava,